प्याज खेती कसरी गर्ने ? सरल र सहज उपाए! – Digital Khabar
२८ फागुन, काठमाडौं । प्याजलाई एउटा प्रमुख मसला बालीको रुपमा चिनिन्छ । प्रायः गरेर कृषकहरूले बैशाख महिनामा प्याजखन्ने भएकाले त्यतिबेला बजारमा प्याज प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । त्यसैले बजारमा प्याजको मूल्य घट्न जान्छ र कृषहरूले उचित मूल्य पाउदैनन । तर त्यस समय भन्दा अघि र पछि बजारमा प्याजको मूल्य प्राय उच्च हुने गर्दछ ।
बजारको माग पूरा गर्नका लागि बाहिरबाट प्याज आयत् हुने गर्दछ । त्यसैले कृषकहरूले प्याज खेतीबाट बढी फाइदा लिनका लागि वेमौसमी प्याज लगाउनुनै एउटा उत्तम उपाय हो । प्याज खेतीको लागि २० देखि ४० डिग्री सेन्टीग्रेडसम्मको तापक्रममा उपयुक्त मानिन्छ ।
दिनमा ३० डिग्रीसेन्टीग्रेड र रातमा २० डिग्री देदि सेन्टी ग्रेड औषत तापक्रममा प्याजको बिरुवाको वृद्धि तथा विकास राम्रो हुन्छ । बाली पाक्ने समयमा उज्यालो घाम र कम तापक्रम भएको दानाम कार्वो हाइड्रेडको मात्र विकास हुन सहयोग पु¥याउँदछ ।